Tonga any amin'ny Apple TV App Store | ireo sokajy vaovao Vaovao IPhone
El App Store do Apple TV andiany faha-XNUMX, izay tadidinay fa mampiasa karazana iOS 9 antsoina hoe tvOS, dia manatsara hatrany rehefa mandeha ny andro. Hatramin'izao dia nisy mpampiasa sasany afaka nijery sokajy fampiharana roa (lalao sy fialamboly) roa, isa izay nitombo izao. sokajy fito. Raha ny lojika, arakaraka ny hisian'ny safidy ananantsika dia ho mora kokoa ny mahita ilay rindranasa tadiavintsika, ary vao mainka aza isika izao tsy afaka mampiasa keyboard na iPhone na iPad hampidirana ny lahatsoratra.
Ireo sokajy vaovao nampiana dia fampianarana, Fahasalamana sy fahasalamana, Lifestyle, About us y fanatanjahan-tena. Ireo mpampiasa izay efa nanana ny sokajy roa teo aloha dia tsy mila manao na inona na inona. Midira fotsiny amin'ny menio «Sokajy» ary ho eo izy ireo miandry. Tsy hitako manokana izy ireo, ka mbola hanam-paharetana ihany aho. Ny fahatongavan'ireo menus app Apple TV 4 App Store vaovao dia hiadana ary mieritreritra aho fa ho tonga haingana any amin'ireo mpampiasa US izy ireo.
Tsy mazava ny fomba anampian'i Apple ireo sokajy vaovao. Ao amin'ny iDownloadBlog, izay toerana nahazoako ny sary nampiana, mino izy ireo fa ireo sokajy ireo afaka nampiana ho azy rehefa misintona azy ireo ny mpampiasa na, raha lazaina amin'ny teny hafa, dia ampidirina ao amin'ny filaharan'ny lazany. Somary hafahafa ihany, fa azo atao. Ny mety hafa dia ny hanampian'i Apple ireo sokajy satria mino izy ireo fa ho liana kokoa ny mpampiasa na ny tenany, ity farany miankina amin'ny fidiram-bola azon'izy ireo ananana ary aiza no ilazan'ny lalao miaraka amin'ny fividianana mifangaro.
Mazava ho azy, na dia manana fahaiza-manao betsaka aza ny Apple TV vaovao, ny lesoka amin'ny App Store azy dia mampiseho fa mbola mila voakilasy izy. Mbola tsy hitako ireo sokajy ary manahirana ahy ny mahita rindranasa vaovao, fa tsara kosa ny mahita ny fahitan'ny mpampiasa hafa azy ireo ary mieritreritra fa ho avy tsy ho ela aho. Efa hitanao ve ireo sokajy? Aza misalasala mamela ny hevitrao, izay hanampy anay hahafantatra raha tonga any aminay ireo karazana fanavaozam-baovao na avy amin'ny firenena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple tv » Tonga any amin'ny Apple TV App Store ny sokajy vaovao
JM Grana dia hoy izy:
Omaly aho dia nividy ilay Apple TV 64-gigabyte tao Mediamarkt ary tamin'ity maraina ity dia tsy niasa ho ahy intsony izany. Nanova azy ho an'ny vaovao aho ary hahita hoe manao ahoana ary amin'izao fotoana izao ao amin'ny Apple Store dia mbola tsy nahita fiovana sokajy. Ny nahadiso fanantenana ahy dia ny tsy ahafahako mampifandray ny fitendry na mampiasa ny app iOS lavitra. Etsy ankilany, ao amin'ny Apple TV 3 taloha eny.
Valiny tamin'i JM Grana
Salama, JM Grana. Ny zavatra fitendry dia diso fanantenana amin'ny ankapobeny. Tsy misy faly amin'izany (Iza no afaka?). Manantena aho fa lasa mifanentana ny lavitra. "Azoko ilay izy" fa aleon'i Apple mivarotra ilay mpanera na ampiasaintsika hampiasa azy io, fa inona kosa ny vidiny raha ampiana fanohanana fanoratana? Na dia hapetraka tsara aza io rehefa afaka mampiditra lahatsoratra amin'ny feo isika.
Mikasika ireo sokajy dia manamafy ianao fa tsy mandeha eto izy, fa tsy izaho irery. Tokony ho fanavaozana karazana WhatsApp miaraka amin'ireo antso izy: isaky ny tianao dia kitiho ny bokotra dia manana izany izahay.